Ị nọ ebe a : >lọ>Product>Omenala GRC dị elu>Fọm GRC
Model Number: Modering GRC
GRC (ihe eji eme ka iko gi di nma) jiri ahihia ciment dika ihe ndi ozo, ma jiri otu ihe eji eme ka alkali guzogide ihe oru GRC. Usoro mmepụta nke GRC bụ ụdị pụrụ iche. Jiri ihe mkpuchi ikuku iji fesaa ngwakọta nke ciment na eriri iko n'ime ebu prefabricate, ọ nwere ike melite kọmpi, ike, na ịgba mgba nke ngwaahịa ahụ mgbe ị na-ahụ ike nke ihe ahụ.
Thusdị otu esi emepụta si dị iche na nke a na - ahụ anya. Na Europe na America, a na-ejikarị mpempe akwụkwọ GFRC eme ihe dị ka bọọdụ mpụga nke mpụga.
Nchedo ume na mbelata ikuku: ma e jiri ya tụnyere ihe ndozi ndi ozo, GRC na-ewepu ume di ala n’icheputa ya. Ndị ọkà mmụta Japan emeela ntụnyere ikuku carbon carbon dị n’agbata mgbidi akwụkwọ ndụ GRC na mgbidi mgbidi siri ike, na iji ihe ogwe ihe GRC nwere ike belata uzu ikuku carbon site na 30%.
GRC Sommth elu